Oil Sketch, Money Pro ary Translate 3 ho an'ny Safari, amidy anio | Vaovao IPhone
Oil Sketch, Money Pro ary Translate 3 ho an'ny Safari, amidy androany
Manohy amin'ity herinandro ity izahay izay efa namoahanay rafitra vaovao miasa tolotra sy fampiroboroboana bebe kokoa amin'ny lalao sy fampiharana ho an'ny iPhone, iPad ary, mazava ho azy, fitaovana iPod touch, ilay fitaovana izay adinontsika matetika ny manonona azy. Ary androany dia manao izany amin'ny fampiharana telo tena ilaina isika: mpamoaka sary, mpitantana vola manokana ary mpandika tranonkala.
Aza adino fa ny tolotra rehetra ho hitanao etsy ambany dia Fotoana voafetra. avy amin'ny Vaovao IPhone Izahay dia afaka manome toky ny maha-marina azy io amin'ny fotoana namoahana ity lahatsoratra ity, fa tsy taty aoriana satria tsy manome izany fampahalalana izany ireo mpamorona. Noho izany, ny torohevitray dia hoe, raha mahaliana anao, sintomy haingana araka izay azo atao izy ireo mba handray soa amin'ny fihenam-bidy. Raha tsy araka ny nantenainao izy ireo dia azonao averina izany ary averinao ny volanao.
1 Taratasy solika
2 Pro vola
3 Adika 3 ho an'ny Safari
Nanomboka tamin'ny «Oil Sketch» ​​izahay, fampiharana mahafinaritra izay azonao atao ovay ho lasa sary hosodoko solika tsara tarehy sy sary ny sarinao ary alefaso ho carte postales mihitsy izy ireo na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Safidio fotsiny ny sary iray avy ao anaty horonana anao ary makà sary mivantana amin'ny alàlan'ny fakantsary ao anaty fampiharana, asio sivana ary ho lasa sary hosodoko solika azonao zaraina amin'ny tambajotra sosialy, hafatra, mailaka ary maro hafa
Ny "Oil Sketch" dia misy vidiny mahazatra 3,49 € fa ankehitriny dia afaka mahazo izany amin'ny € 1,09 fotsiny.
«Money Pro» dia fampiharana ara-bola izay hanampy anao mitantana sy mandrafitra ny fandoavam-bola sy ny faktiora anao, manomana teti-bola, manara-maso ny volanao manokana ary maro hafa. Izy io dia ampifanarahana amin'ny fitaovanao rehetra ary manana fiasa tsy tambo isaina izay azonao araraotina, na eo amin'ny toekarem-pianakaviana, na amin'ny kaontinao matihanina.
Ny "Money Pro" dia manana vidiny € 5,99 mahazatra nefa izao dia afaka mahazo 3,49 € fotsiny ianao.
Adika 3 ho an'ny Safari
Ary mifarana amin'ity rindranasa ity izay efa noresahinay taminareo tamin'ny fotoana hafa. Raha tsy nahita ilay fotoana ahazoana maimaimpoana ianao dia manana fotoana vaovao tsy tokony hadino. «Translate 3 for Safari» dia fanitarana ho an'ny Safari izay azonao atao adikao ny pejy web manontolo amin'ny fiteny zato mahery, fa mitandrema, satria tsy izany irery no fiasa.
Ny "Translate 3 ho an'ny Safari" dia misy vidiny mahazatra 5,49 € fa ankehitriny afaka azonao maimaim-poana tanteraka izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » fivarotana » Oil Sketch, Money Pro ary Translate 3 ho an'ny Safari, amidy androany
Luis Guevara dia hoy izy:
ny roa voalohany dia tsy maimaim-poana ary ny farany amin'ny alàlan'ny default dia maimaim-poana ary ny kinova Pro dia voaloa.
Valiny tamin'i Luis Guevara
Mazava ho azy, raha tolotra "fotoana voafetra" izy ireo, izay efa nampitandremanay tany am-piandohana. Tokony ho haingana araka izay azo atao ianao. Azo antoka fa amin'ny fotoana hafa dia manana vintana bebe kokoa ianao. Na izany aza, tokony holazain'ny mpandrindra hoe mandra-pahoviana no mbola mitombina ny tolotra, ankafizin'ny mpampiasa izany.
Amazon dia mampihena ny vidin'ny atiny 4k hifanandrinana amin'i Apple
Mpampiasa maro no mimenomenona noho ny tsy fahombiazan'ny fahombiazany, ny faharetany ary ny olana amin'ny bateria amin'ny iOS 11